डा. शेखर कोइराला - जम्काभेटमा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
डा. शेखर कोइराला – जम्काभेटमा !
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०७२, आईतवार October 14, 2015
डा. शेखर कोइराला नेपाली राजनीतिमा स्थापित नाम हो । नेपाली काँग्रेसभित्र निष्ठाको राजनीति गर्ने डा. कोइरालासँग एमएनटीभीका लागि भीमसेन सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानी : जम्काभेट कार्यक्रममा ।
Jamkavet with Dr Shekhar Koirala
कोइरालाको यस्तो भनाइ :
बहुलवाद भनेको समाजको बहुलता नै हो । बहुलतालाई स्वीकार्ने, त्यसलाई समाजको चरित्र मान्ने र बहुलताबीच हुने असमानताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने आचरण नै बहुलवाद हो ।
नेपाली कांग्रेसको जन्म नै बहुलवाद स्थापित गर्नका लागि भयो । वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता नेताहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बहुलवाद स्थापित गर्ने लडाइँमै खर्च गर्नुभयो । आजको दिनसम्म निरंकुशता विरुद्धका कुनै पनि आन्दोलनमा पार्टीका अग्रज नेताहरूले कसैसँग सम्झौता गरेनन् । संविधान निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा बहुलवाद शब्द संविधानको प्रस्तावनामा नराख्ने हो भने कांग्रेसले २००७ सालदेखि लडेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूलमर्म नै समाप्त हुने खतरा हुन्छ । बहुलवाद शब्दलाई कुनै पार्टी विशेषसँग जोडेर हेर्नु दुर्भाग्य हो । यसको सट्टामा जस्तोसुकै शब्द राखिएको छ भन्ने तर्क गरे पनि त्यो अपूर्ण रहन्छ । बहुलवादलाई कुनै शब्दले पनि सही सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसकारण बहुलवाद शब्द संविधानको प्रस्तावनामै राखिनुपर्छ ।
पहिले युरोपमा चर्चले शासन गथ्र्यो । यसै क्रममा जनता र चर्चबीच लडाइँ चल्यो । लडाइँमा जनताले जिते । त्यसपछि ती मुलुकलाई उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे । धर्मनिरपेक्षता विदेशबाट आयातित शब्द हो । नेपालमा कुनै धर्मले कहिल्यै शासन गरेन । नेपाल परम्परादेखि धार्मिक सहिष्णुतामा अडेको मुलुक हो । हाम्रा लागि सबै धर्म बराबर हुन् । सबै धर्मको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुनु जरुरी छ ।
धर्मनिरपेक्षता शब्दले शताव्दीऔंदेखि रहँदै आएको धार्मिक सहिष्णुतालाई खलबल्याउने मात्रै होइन, समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । धर्मनिरपेक्षता भनेर उल्लेख गरिँंदा विभिन्न बहानामा धर्म परिवर्तन गराउन बाध्य पारिन सक्छ । त्यसकारण संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द परिवर्तन गरी त्यसको सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राखिनुपर्छ वा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द संविधानबाटै हटाइनुपर्छ । साथै कुनै पनि प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्छ । गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर लेखिनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिले सडकमा उठेका धर्मसम्बन्धी प्राय: सबै मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ ।
ज्ययाकी श्राफकी छोरी नांगिएपछि बलिउडमा हंगामा
एजेन्सी, बलिउड करि बाहिरिएका अभिनेता ज्याकी श्राफकी छोरी कृष्णा श्राफ एकाएक चर्चामा आएकी छिन् । श्राफले […]
Dr KC withdraws hunger strike for the time being
Kathmandu, Oct 7:Dr Govinda KC who startedafast-onto-death for the ninth time, putting forth various […]